စုံစီနဖာ မောင်ပေလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စုံစီနဖာ မောင်ပေလာ
Posted by မောင် ပေ on Jun 12, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games, My Dear Diary | 33 comments
ကွမ်းပို့ စ် ပွဲကြို အထောက်အကူပြု
မင်္ဂလာပါ ရွာသူားတို့ နဲ့ ၊ စာဖတ်သူ ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ …
ထုံးစံအတိုင်း ကျုပ် မောင်ပေ တစ်ယောက် အရေမရ အဖတ်မရ ကွမ်းပို့ စ် တစ်ပုဒ်အဖြစ် အပျင်းပြေ ဖတ်စရာတစ်ပုဒ် ရေးတင်လိုက်ပါပြီ ။
ကျုပ်တို့ ရွာအတွင်း အခုရက်တွင်း ၊ ရခိုင်သတင်းများကြောင့် ၊ ဖတ်ရသူအပေါင်း ဝမ်းနည်း ဒေါသဖြစ် ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရမှာပါ ။ ကျုပ်တောင် စာရေးမလို့ လာတိုင်း ၊ ဆိုက်ထဲက ပို့ စ်တွေဖတ် ၊ ပြီးရင် ခံစားချက်တွေဖြစ်ပြီး ၊ စာမရေးဖြစ်ဘဲ ဖတ်ရုံ ကွန်မင့်ရုံနဲ့ ပြန်သွားခဲ့ရတာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါဘီ ။
အခုတော့ တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ရေးတင်ဦးမယ်ဗျာ ။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပို့ စ်တော်တော်များများမှာ … ၊ ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ရဲ့ ကွန်မင့်တွေဟာ best comment အဖြစ် စိမ်းနေတာ ကို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ နေရတယ်ဗျ ။ ကျုပ်ကတော့ သဂျီး ဆာဗာ ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့်မို့ ဘဲ ထင်မိပါတယ် ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ၊ အခုကန်နေတဲ့ ယူရို ၂၀၁၂ ပွဲများအကြောင်းကနေ စပြောမယ်ဗျာ
ပထမဆုံးအဖွင့်ပွဲနေ့ မှာ ကန်ခဲ့ကြတော့
ပိုလန် ၁-၁ ဂရိ ( ပိုလန် က ပူးတွဲအိမ်ရှင် )
ရုရှား ၄-၁ ချက် ( ရုရှား က မထင်မှတ်ဘဲ ခြေစွမ်းတော်တော်ပြနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ ရတယ် )
ဒုတိယနေ့ မှာတော့ ဂျာမနီ နဲ့ ပေါ်တူဂီ တို့ ရဲ့ တစ်ကယ်ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ ပွဲ ကို တွေ့ ရပြီး ၊ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားတဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဟော်လန် အသင်းကတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ဒိန်းမတ် အသင်း ကို ရှုံးခဲ့တယ်ဗျာ ။
ဟော်လန် ၀-၁ ဒိန်းမတ်
ဂျာမနီ ၁-၀ ပေါ်တူဂီ
တတိယနေ့ မှာတော့ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး စပိန်အသင်းဟာ အီတလီ အသင်း ကို နောက်ကနေ ခြေပဂိုးသွင်းရင်းနဲ့ သရေကျခဲ့ပြီး ၊ ခရိုအေးရှား အသင်းကတော့ အိုင်ယာလန်အသင်း ကို ဂိုးပြတ်နဲ့ နှိပ်ကွက်သွားပါတယ် ။
စပိန် ၁-၁ အီတလီ
ခရိုအေးရှား ၃-၁ အိုင်ယာလန်
မနေ့ ညတုန်းကတော့ ကျုပ်တို့ မြန်မာဘောလုံးဝါသနာရှင်များ ရဲ့ အချစ်တော် အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ပြင်သစ်အသင်းကို နောက်ခံလူ လက်စကော့ ရဲ့ ခေါင်းတိုက်ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ပြင်သစ်တိုက်စစ် ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သရေ နဲ့ ဘဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပြီး ၊ ပူးတွဲအိမ်ရှင် ယူကရိန်း အသင်းကတော့ ဆွီဒင် အသင်းကို နောက်ကျဂိုးများနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ၁-၁ အင်္ဂလန်
ယူကရိန်း ၂-၁ ဆွီဒင်
မနေ့ ညကအထိ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးရက် မှာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များဟာ ဘာကို သတိထားမိသလဲ ဆိုရင် ၊ ဖော်မြူလာ တစ်ခု ထုတ်လို့ ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာကတော့ ၊ ၁၀နာရီခွဲ မှာ ကန်တဲ့ ပွဲဆိုရင် အောက်အသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အသင်းက ကြေးစားခဲ့ပြီး ၊ ညမိုးချုပ်ပွဲတွေမှာတော့ အထက်အသင်းတွေ ကြေးစား ခဲ့တာ ကို ဆက်တိုက်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။
“ ဂရိ ၊ ဒိန်းမတ် ၊ အီတလီ နဲ့ အင်္ဂလန် ” အသင်းတွေဟာ အောက်အသင်းတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၊ သူတို့ ကို အားပေးသူများကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ် ။
“ ရုရှား ၊ ဂျာမနီ ၊ ခရိုအေးရှား ၊ ယူကရိန်း ” အသင်းတွေဟာ အထက်အသင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ သူတို့ ကို အားပေးသူများကို အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ် ။
သည်ကနေ့ 12.6.2012 မှာ ကန်ကြမှာကတော့
၁၀.၃၀ ချက် – ဂရိ
၁.၁၅ ပိုလန် – ရုရှား
ချက် နဲ့ ဂရိ ပွဲမှာ ချက်အသင်း က အထက်အသင်းအဖြစ် သက်မှတ်ထားပြီး ၊ ချက်အသင်းဟာ သရေ ဆိုရင် ၅၀% ဆုံးရှုံးမယ်လို့ ဖွင့်ထားပါတယ် ။
ပိုလန် နဲ့ ရုရှား ပွဲမှာတော့ ရုရှားအသင်းက အထက်အသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ၊ ရုရှား ဟာ သရေ ဆိုရင် ၃၀% ဆုံးရှုံးမယ် လို့ ဖွင့်ထားပါတယ် ။
ရှေ့ လေးရက်မှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့သလို
“ ပထမပွဲ အောက်အသင်းစား ၊ ဒုတိယပွဲ အထက်အသင်းစား ” တဲ့ ဖော်မြူလာ ဟာ သည်ကနေ့ ညမှာ ဆက်မှန်ဦးမလား ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ။
ကျွန်တော့် အကြိုက် ရွေးခြယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ၊ အိမ်ရှင်ပိုလန် ဟာ နှစ်ပွဲဆက်တိုက် အခြေအနေမဆိုးနိုင်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ကြမယ့် အချက် ကို ဆန့် ကျင်ပြီး ၊ “““ ရုရှား ””” အသင်းဘက်ကနေ အားပေးပါမယ် ။ ရုရှား အနိမ့်ဆုံး သရေ ကန်နိုင်ပါတယ် ။
007 ရဲ့From russia with love ဇါတ်ကားကို သတိရနေမိပါတယ် ။
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာအနေနဲ့ ကတော့ ၊ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မြေရောင်းမြေဝယ် ကိတ်စများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံလေး ကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ပိုက်ဆံပိုလျှံလို့ မြေဝယ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် မောင်ပေ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂လပိုင်းကစလို့ ၊ ပလုံပလုံ နဲ့ စီးပွားကျဆင်းခဲ့ရာမှာ ၊ ယနေ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ၊ ဘာမှကို ရင်းနှီးစရာ မရှိလောက်အောင် ကို ချွတ်ခြုံကြ ကြွေးဘလဗျစ် နဲ့ ဖြစ်နေရပါတယ် ။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပေါင်းအသင်းကောင်းများရဲ့ မစမှုများကြောင့်သာ ဟန်မပျက်လေး မခို့ တရို့ လေး ပြုံးနေနိုင်ပါတယ် ။
ူလူက ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဘာမှ မလှုပ်နိုင် မတတ်နိုင်တော့တဲ့ အချိန်ခါကြမှဘဲ ၊ ငွေရင်းနှီး နဲနဲ နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ တစ်ပုံကြီး တွေ့ မြင်ရပါတယ် ။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူနဲ့ အတူ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ရာ စကားခေါ်လာပါတယ် ။
ဘာလဲ ဆိုတော့ ၊ မြေကွက်ဝယ်ထားဖို့ ပါဘဲ ။ ကျွန်တော့်အခြေအနေအထား ကို ပြောပြလိုက်တော့ ၊ မိတ်ဆွေက ဘယ်လို ကူညီပေးသလဲ ဆိုရင် ၊ သူ မြေကွက် သွားဝယ်ပါတယ် ။ သူဝယ်ခဲ့တဲ့ မြေကွက်ထဲကနေ ၃ ကွက် အတွက် အကျိုးအမြတ် ကို ကျွန်တော့် ကို ပေးမယ် လို့ ပြောပါတယ် ။
ဘယ်နေရာမှာလဲ ဆိုရင်တော့ ၊ မန်းတလေး မူဆယ် လမ်းပေါ်ရှိ ၊ နောင်ချို မြို့ ကနေ ရပ်စောက်-ဗထူး အထိ ကို ကားလမ်းအသစ်ကြီး ဖောက်နေပါတယ် ။ အေးရှားဝေါ ကုမ်ပဏီကနေ ဖောက်နေတာပါ ။ လမ်းမကြီးဟာ ၇၀%ခန့် ပြီးနေပါပြီ ။ အချောသတ်ဖို့ ဘဲ ကျန်ပါတော့တယ် ။ အဆိုပါ လမ်းသစ်ကြီးရဲ့ ဘေးတစ်ဘက်စီရှိ လယ်ကွက် ၊ မြေကွက်များ ကို လဲ အကွက်တွေရိုက်ပြီးသွားပါပြီ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပတ်ကျော်ခန့် က ၊ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ သွားဝယ်ခဲ့တာ “ ပေ၆၀ x ပေ၆၀ ” တစ်ကွက် ကို ၂သိန်းခွဲကျပ် ဈေးနဲ့ ပါ ။ အဲ့ဘက်က လယ်မြေ ၊ မြေရိုင်းတွေဆိုတော့ တစ်ကွက်ချင်းတော့ ဝယ်လို့ မရပါဘူး ၊ ဘယ်သူမှလဲ ပေးမရောင်းပါဘူး ။ “ ပေ၆၀ x ပေ၆၀ ” အကွက်ပေါင်း ၄၀ ၊ ခန့် မှန်းခြေ လေးဧက ခန့် ၊ မျိုး ကို ဝယ်ရတာပါ ။ လယ်မြေဆိုလို့ ၊ လယ်စိုက်ရမယ်တို့ ဘာတို့ ပြဿနာ ရှိမှာပေါ့ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နိုးပရော်ဘလန်ပါ ။ အခုဟာ က နောင်ချိုမြို့ ကနေ ရပ်စောက်-ဗထူး အထိ လမ်းအသစ်ဖောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၊ လယ်မစိုက်လဲ ရတဲ့ အနေအထား ၊ သီးနှံစားတဲ့ မြေကွက်ဆိုပြီး အရင်ပြောင်းပြီး နောက်တစ်ဆင့် ပုံစံ၂၂ / လူနေထိုင်ခွင့် ကို ချက်ချင်းပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။ စာရွက်စာတမ်းကိတ်စ က တစ်လအတွင်း ရနိုင်ပါတယ် ။ အကွက်၄၀စာ ကို စာရွက်စာတမ်း ရုံးစရိတ် အပြီးအစီး ကို ၆ သိန်းကျပ်ခန့် ကုန်ကြပါတယ် ။ ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ ၊ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ဝယ်ခဲ့တဲ့ မြေကွက် ဟာ မနေ့ တုန်းကဆိုရင် တစ်ကွက် ကို ၅သိန်းကျပ်ဈေး လာပေးနေပါပြီ ။ သူကတော့ ဆက်စောင့်ကြည့်ဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
အကြာကြီးတော့ မစောင့်ပါဘူးတဲ့ ။ ရောင်းရတာနဲ့ သုံးကွက်စာ အကျိုးအမြတ် ကို ကျွန်တော့် ကို ပေးပါမယ်တဲ့ဗျာ ။
ဆိုတော့ဗျာ… မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ် က ပိုက်ဆံပိုလျှံနေလို့ ၊ မြေဝယ်ထားချင်သူများအတွက် ၊ နောင်ချို မြို့ က ရပ်စောက်-ဗထူး လမ်းသစ်ပိုင်း အနေအထားဟာ လက်ရှိမှာ လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ၊ ရင်းနှီးဖို့ သင့်လျော်သော ပွိုင့် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၊ ကျွန်တော် မောင်ပေ က စေတနာ နဲ့ အသိပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
မောင်ပေက- ရတနာပုံကို လက်တို့ ပြထားတာပဲ။
ရတနာပုံအထိလောက်တော့ မကြီးကျယ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ။
သို့ ပေသည့်… စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ တစ်ခု ရဖို့ ရာ စေတနာထားပြီး ရေးလိုက်တာပါ ။
ကပေ တယောက် မြန်မြန်အဆင်ပြေနိုင်ပါစေလို့။
ကြိုက်တယ် ….ဘယ်လိုဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမယ် ဘယ်မှာရောင်းဝယ်ရမယ်ဆိုတာလေး
ဆက်ရေးပေးဦး ။ ရန်ကုန်မှာလဲ ကားတိုက်လိုက် မြေမြိုလိုက်နဲ.ဆိုတော. ဒီတစ်ခါတောင်စောင်း
ပေါ်ကလိမ်.ကျဖို.ဘဲကျန်တော.တယ် ။ ခု ချက်ကနေထားတာ …နောက်ပွဲ အောက်ကြိုက်တယ် ။
ပထမပွဲတော့ ဂွင်ပျက်သွားပြီ ကိုပေရေ ချက်က ဂရိကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ သမသွားပါကြောင်း…….
ဒုတိယ က သရေဆိုတော့ မှန်သည်လို့ ဆိုရမည်လော။
ကပေ ရဲ့ မြေဈေး ကတော့ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမရှိပါဘူး။
ဇောတိက… ဇတိလ.. မေဏ္ဍက.. ကာက၀လိ.. အစရှိသည့်.. နှံ့သိကျော်ဟိုး.. ရှေးကောင်းကျိုးကြောင့်.. မညိုးသတင်း.. ဂုဏ်မျိုးလင်းလှသည့် သူဋ္ဌေးမင်းတိုရဲ့ စီးစိမ်ကြီးနဲ့ ကာရာအိုကေ.. မာဆတ်.. နိုက်ကလပ်ပါမကျန် မြန်မြန်ကြီးကို စံစား ခံစားနိုင်ပါစေဗျာ။
” ကျွန်တော် မောင်ပေ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂လပိုင်းကစလို့ ၊
ပလုံပလုံ နဲ့ စီးပွားကျဆင်းခဲ့ရာမှာ ၊ ယနေ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ၊
ဘာမှကို ရင်းနှီးစရာ မရှိလောက်အောင် ကို
ချွတ်ခြုံကြ ကြွေးဘလဗျစ် နဲ့ ဖြစ်နေရပါတယ် ”
စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုပေ ရယ် ။
ပြန်လည် အောင်မြင် လာပါစေ ။
အဘဖော ဆုတောင်းပေးသလို အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာပါစေဗျား
စကားမစပ် တဲ့ စကားချိုလေး ပြောခွင့်ရင်
ဆွေမျိုး ထက် မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်း က ကိုယ့် စီးပွားကို မ စ နိုင်၏။
သို့သော် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတတ်သူများ ကိုတော့ အထူးသတိထား ဆင်ခြင် ရှောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသူများကြောင့် စီးပွားတင် မက ဘဝပါ ပျက်နိုင်ပါသည်။
အဘဖောတို့ မိသားစု စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်ပါစေ။
အော်..မအိရယ် ၊ အတွေ့ နောက်ကြလိုက်ရလေခြင်းနော…
အခုလို မအိရဲ့ ကရုဏာလေးကို ဖတ်လိုက်ရလို့ ၊ ဘဝမောတွေပြေရတယ်..
ဘောလုံးပွဲအကြောင်းတွေတော့ စိတ်မ၀င်စားလို့သိပ်မသိဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်
ကိုပေရေ။ ကိုပေတစ်ယောက် ပြန်လည်အောင်မြင်တိုးတက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
တစ်ကယ် အဆင်ပြေသွားလို့ 
တစ်ကယ် ကျွေးမယ့်နေ့ ကြရင်သာ
မေလေး ရှိနေပါစေကွယ် ။
“ ပေ၆၀ x ပေ၆၀ ” တစ်ကွက် ကို ၂သိန်းခွဲကျပ် ဈေးနဲ့ ပါ ။ အဲ့ဘက်က လယ်မြေ ၊ မြေရိုင်းတွေဆိုတော့ တစ်ကွက်ချင်းတော့ ဝယ်လို့ မရပါဘူး ၊ ဘယ်သူမှလဲ ပေးမရောင်းပါဘူး ။ “ ပေ၆၀ x ပေ၆၀ ” အကွက်ပေါင်း ၄၀ ၊ ခန့် မှန်းခြေ လေးဧက ခန့် ၊ မျိုး ကို ဝယ်ရတာပါ ။ ….
…အကွက်၄၀စာ ကို စာရွက်စာတမ်း ရုံးစရိတ် အပြီးအစီး ကို ၆ သိန်းကျပ်ခန့် ကုန်ကြပါတယ် ။
၄၀ x ၂.၅ သိန်း = ၁၀၀
၆ သိန်းထပ်ပေါင်း ၁၀၆ သိန်း လောက် ရင်းရမှာပေါ့..
စိတ်ဝင်စားသော်လည်း အကွက် ၄၀ စာထိ မလိုက်နိုင်သေးဘူးဗျာ..ဟူးးး
အကွက်၂၀ လိုက် ၊ အကွက်၂၀ကျော်ရှိတာမျိုး ၊ အကွက်၄၀ထက် ပိုတဲ့ အကွက်များ လဲ ရှိပါတယ် ကိုရွာစားရေ..
ကျေးဇူးပါဘဲ ဗျာ ။
“pooch” = အမ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ဝရစေသား….
“ကိုဆာမိ” နဲ့ “ကိုအညှာတမာ” တို့ ရေ ၊ ၄ ရက်တိတိ မှန်ခဲ့တဲ့ “ အောက် ၊ အပေါ် ”ဟာ ၊ မနေ့ ညကတော့ “ အပေါ် ၊ အောက် ” ဖြစ်ခဲ့သွားတာဗျ ။ ရုရှားက ၃၀%ဘဲ ပါသွားလို့ နဲနဲတော့ ဖြေသာချင်စရာ ။
“အရီး Khin Latt” ခင်ဗျား ၊ စပါးဘဲဖြစ်မှာပါ ခင်ဗျ။ ဒီတစ်ပတ် မော်ဒန်ဂျာနယ်ထဲက အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးကတော့ ဒီလိုပြောထားပါတယ် ။ “မြေဝယ်မကျ” တဲ့
“အူးဘဇင်းဇောက်” ဖလာ့ ၊ အခုလို ကြွရောက်လာပြီး ကွန်မင့်ချီးမြှင့်ပြီး သကာလ ၊ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးတော်မူဒဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဖလာ့
တကယ်တော့ ကိုပေမှာ အရင်းအနှီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်…။
ပထမတမျိုးက ငွေ ဆိုပါတော့..။ အဲဒါက လောလောဆယ် နည်းသွားတယ်ပေါ့..။ ဟုတ်ပါပြီ..။
ဒါပေမယ့် နောက်အရင်းအနှီးတမျိုးက မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း အဆက်အသွယ်ပါ..။ အဲဒါကနည်းမသွားဘူးလေ..။
ဘ၀မှာ ဆင်း တဲ့အခါ အဖေါ်မလိုဘူး…။ အဖေါ်လဲ သိပ်မရှိတတ်ဘူး..။
ဘ၀မှာ တက် တဲ့အခါတော့ အတူဆွဲခေါ်မယ့် အဖေါ်က အရေးကြီးတတ်ပါတယ်။
အင်အားဖြစ်စေသော ကွန်မင့်လေးပါ ခင်ဗျာ
“ ဘ၀မှာ ဆင်း တဲ့အခါ အဖေါ်မလိုဘူး…။ အဖေါ်လဲ သိပ်မရှိတတ်ဘူး..။
ဘ၀မှာ တက် တဲ့အခါတော့ အတူဆွဲခေါ်မယ့် အဖေါ်က အရေးကြီးတတ်ပါတယ်။ ”
ဘက်စ်ကွန်မင့်အဖြစ် ရွေးခြယ်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျ ။
ဝက်ခြံ မို့ လား
တကယ်တော့ တတိယ အရင်းအနှီးလဲရှိသေးတယ်…
အပျိုကြီး ၂ ယောက်လေ…။
(ဒီနေ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မနောက်ရသေးလို့… )
ဟိုတစ်ခါ ကျုပ်ပြောကတဲက ကျုပ် ကို တူတော်ချင်နေတာပေါ့.. ဟားဟား
အိမ်က မဒမ်ပါလေရာ နဲ့ အရင် ညှိဗျာ ။
အခုလောလောဆယ်တော့ လားရှိုးဘက်က လေချူသီး စိုက်ခင်းတွေ ဈေးပေါလို့ဝယ်ထားပါတယ်ချင့်
မေမြို့အထွက်နားကလား မသိ မြေကွက်တွေ ဈေးပေါပါကြောင်း
ခင်တဲ့ မန်းလေးက ဘိန်းစားဖရဲ
မေမြို့ အထွက်မှာ ၃၀ လောက် အကွက်ဆိုစိတ်ဝင်စားသွားဘီ
မိုးကြိုးပစ်နားဆိုရင်တော့ တစ်ဧက သုံးဆယ် ဆိုတာ လမ်းမကြီးဘေး မရလောက်ဘူး ။ လမ်းမကြီး ရဲ့ ဘေး ၃ ၊ ၄ကွက် ငုတ်လောက် ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ် ။
windtalker9@gmail.com ကို မေးလ်ပို့ ပြီး သိချင်တာ ကို မေးနိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေပေးပါမယ် ။ ဂျီတော့ ကတော့ မသုံးတော့ပါဘူး ။
ိဘောလုံးပွဲကတော့စပိန်ကိုပဲ အားပေးတယ်..လောင်းတာကိုတော့လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပါ.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စပိန်ဖက်ကလောင်းပါပြီတဲ့..သူရှုံးရင် ကိုယ်ကနှစ်ခါနာ…. ဦးပေရယ်….မတည်မြဲသောအရာတွေအတွက်ကိုတော့ တရားနဲ့သာဖြေပါ… အဲဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကို သိရက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာ ဆိုရင်တော့ နောင်တရပါ…နောက်မကျသေးပါ… အမြန်ဆုံးပြန်လည်အဆင်ပြေပါစေ… အဒေါ်အပျိုကြီးတွေလည်း အမှတ်မရှိပဲ အရင်းအနှီးတွေထပ်ပေးပါစေ…
မြေကွက်ကိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်…၀ယ်ပြီး စာရွက်စာတမ်းကိစတွေပြီးရင် ဒီတိုင်းထားလို့ရရဲ့လား..အစောင့်တွေထားရမှာတွေ..အပင်စိုက်ပြရမှာတွေ..အိမ်ဆောက်ပြရမှာတွေဆိုရင် တော့နည်းနည်းခက်မယ်နော်..ကိုယ်နဲ့က တော်တော်လေး အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့လေ..
မောင်ပေ ခုချိန်မှာ ငွေနည်းပေမယ့် အပေါင်းအသင်းမနည်းသလို မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာ ခုချိန်မှာ ပိုပြီး တွေ့ရှိရတာပေါ့နော်။ ငွေနည်းတယ်ဆိုတာ ဘီယာသောက်ဖို့ နည်းတာလောက်ပဲဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်…. ခုလို အကြံဥာဏ်ပေးလိုက်တော့လည်း ခုရန်ကုန်မှာ အိမ်ခြံမြေ သင်တန်းလေးတွေ ဖွင့်နေတယ်။ ပြေးတက်ထားရင် ကောင်းမလားမသိဘူး။ အရင်းအနှီးမရှိလည်း ပွဲစားလေး ဘာလေး လုပ်လို့ရတာပေါ့။ ကျေးကျေးပါ…
ကိုပေရေ … စားကျက်ပြတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကြားဖူးနားဝရှိတာကတော့ .. တချို့သော မြေနေရာတွေ ၊ ၀ယ်ပြီး သွားသွားမကြည့်နိုင်တဲ့အခါ ကျူးကျော်တဲလေးတွေ စုံပလုံစိအောင် လာထိုးနေတတ်ကြသတဲ့ …….. ။ ပြန်နှင်လျှင်လည်း အတော်နဲ့ မသွားသလို … ရုံးရောက်ဂတ်ရောက်တွေ ဖြစ်ပြီးမှ …… နောက်ဆုံး လစ်သွာတာ ဆိုပဲ ……..။
တစ်ချို့ဆို … အရင်ဆုံးရောက်တဲ့လူက .. နောက်လူတွေကို အခကြေးငွေယူပြီး ပြန်ငှားစားတာလည်း မြင်ဖူးတယ် … ။ မြေကွက်တခုမှာ တဲသုံးလေးလုံးဆောက်ကြပြီး … ပိုက်ဆံပေးနေတာမျိုးပေါ့ … ရန်ကုန်က ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ ….. အဲ့လို ပြသနာတွေခဏခဏဖြစ်လေ့ရှိတယ် …. ။
ပစ်မထားတဲ့ အကွက်မျိုးဆိုလျှင်တော့ ၀ယ်ထားတာ အကျိုးများမှာပါ ..
ချွက်ခြုံကြ ကြွေးဗရဗျစ်နဲ့ ဖြစ်နေရပါတယ်…..တဲ့ 
“ ခရစ်စတယ်လိုင်း ” နဲ့“အိတုန်” ရေ
ယဉ်ကျေးမှု ရှိတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုပါ ။ ကိုယ့်မှာ ငွေမပေါသေးလို့ ခြံမခတ်နိုင်သေးရင်တောင် ဘယ်သူမှ လာမကျူးကြပါဘူး ။ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကျူးခံရမယ့် ဘေးလွတ်ပါတယ် ။
“ မိုးမင်းသား ” ရေ .. ဆုမွန်ကောင်း ပို့ သတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ကိုပေရေ.. အမြန်ဆုံး စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေဗျာ…
ကျွန်တော်လည်း ကိုပေနည်းတူ ထူလဗြစ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်…
ဘုရားဟော မိတ်ဆွေစစ်တို့ရဲ့ အင်္ဂါကို ပြောပြချင်သေးတယ်ဗျော..
(၁) မကောင်းမှုမှ တားမြစ်တတ်၏
(၂) ကောင်မှုကို သက်ဝင်စေ၏ တိုက်တွန်တတ်၏
(၃) မကြားဖူးသော တရားစကားကို ပြောကြားတတ်၏
(၄) နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်း ခရီးလမ်းကို ပြောကြားတတ်၏
ကိုပေလည်း မိတ်ဆွေစစ်မျာများနဲ့ တွေ့ပြီး အဆင်ပြေပါစေ